Uphononongo lweSistem yezaMandla UKUHAMBA 7, iihedfoni ebukade uzifuna | Iindaba zeGajethi
Uvavanyo lwe-Energy Sistem 7 yokujonga kwakhona ii-headphone
Namhlanje kudlala i- uphononongo olunomdla kakhulu kwabo basebenzisa i-smartphone yabo, phakathi kwezinye izinto ezininzi, ukuva umculo owuthandayo. Kweminye yenye into eluncedo yokwenza iifowuni eziphathwayo, kodwa kwabanye kubalulekile ukuba babe nakho ukuba nomculo kufutshane. Kwaye ukuze ukwazi ukonwabela ngokupheleleyo Inkqubo yamandla iveza UHAMBO 7.
Intloko yentloko leyo hlanganisa itekhnoloji yakutshanje kunye noyilo oluhle kwaye lubalasele. Kwaye basinika i inqanaba lomgangatho kwizinto kunye nesandi ngaphakathi ukufikelela kubavelisi abambalwa kakhulu. Ngakumbi nangaphandle kokuzibeka phakathi kwezixhobo zomsindo ezibiza kakhulu.
1 Ukuhamba nge-7 ngeSistem yaMandla, ii-headphone obukade uzifuna
2 Ukuyilwa kwenqanaba kunye nokugqitywa
3 Olu luhambo lweSistem yaMandla 7
4 Isandi esiqinisekileyo
5 Itshathi yeeNkcukacha zobuGcisa
6 Iinkonzo kunye neengozi zentloko ye-Energy Sistem Travel 7
Ukuhamba nge-7 ngeSistem yaMandla, ii-headphone obukade uzifuna
Amandla eSistem asebenzise kakuhle. Imveliso nganye yale nkampani esibe nethamsanqa lokuyizama isothusile. A Inkampani yaseSpain eyazalelwa eAlicante, ethi ukusukela oko yasekwayo inemigaqo ecacileyo, inike iimveliso ezisemgangathweni ngamaxabiso aphantsi.
Isicwangciso sayo sisebenze kakuhle kangangokuba namhlanje, njengenkampani yehlabathi, sibona indlela Ukhuphiswano kwintengiso zehlabathi kunye neefemu ezinje ngeSony, iPhilips okanye iJBL. Akunakuphepheka ukujonga iimveliso ezinikezelwa yi-Energy Sistem ukuba sifuna izithethi okanye ii-headphone.
Ngeli thuba Sikwazile ukuvavanya ngokucokisekileyo enye yezixhobo ezisetyenzisiweyo ukusukela ekuqaleni kwee-smarpthones, ii-headphone. Kule mihla, ii-headphone ezingenazingcingo ezinonxibelelwano lweBluetooth zibaluleke ngakumbi. Kwaye phakathi kwezinye izinto ngenxa yesigqibo sabavelisi abaninzi sokuhambisa nge-3.5 mm mini jack yokufaka.
Kuba iApple igqibe kwelokuba iyeke ukuba nezibuko elithile kwii-headphone abaninzi balandele ekhondweni lakhe. Kwaye oku kukhokelele kwi- ukwanda okubonakalayo ekusebenziseni ii-headphone "ezingenazingcingo".
Kungenzeka ukuba ukhangele i-headset ye-bluetooth eya kukuqinisekisa. Ngale nto, namhlanje sikuzisa Ukuzibophelela kwe-Energy Sistem ukuba ufuna ntoni ezinye Iintloko zentloko ezinikezela ngomgangatho, isandi esihle ungene ngokubona. Uhambo 7 isenokuba yile nto uyifunayo. Y ngokunqakraza apha ungazithenga kwiAmazon ngaphandle kwentlawulo yokuthumela.
Ukuyilwa kwenqanaba kunye nokugqitywa
Kwabo kuthi abafumana iimveliso ezivela kumashishini amaninzi kangangexesha elithile, kukho into esiya sisiqinisekisa ngakumbi. Uhlobo lwebhokisi kunye nendlela imveliso ethiwe thaca ngayo kuthi kakhulu malunga nento esinokuyifumana ngaphakathi. Sikwazile ukubona ukuba kwenzeka njani "Umdlalo wamanqindi" we-Energy Sistem ukwinqanaba leefemu ezibaluleke kakhulu.
Ibhokisi yentloko eyi-7 yeefowuni iqinisekisa ithiyori yethu eyi-100%. Ngaphandle kobungakanani obukhulu, ukupakishwa kukumgangatho, kwaye yintoni equlathe okungaphezulu. Xa sivula ibhokisi sifumana into esiyithandayo kwaye iyothusa, ibhokisi entle ephethe uziphu.
Kulabo bahlala behamba ngomsebenzi okanye ukonwaba, kubaluleke kakhulu ukuba babe nako indawo ekhuselekileyo neqinile ngokwaneleyo yokugcina ii-headphone zethu. Ukuhamba kweSistem yaMandla 7 kufika kunye Ityala elingagungqiyo elingaphandle elilinganisa ukugqitywa kwekhabhoni yefayibha ukubetha kakhulu. Y ngaphakathi kufakwe umqhaphu othambileyo, opakishwe kakuhle kunye nelaphu elivayo kuba ii-headphone azonakalanga okanye zonakaliswe.
Ukuba sigxila kwii-headphone ngokwazo, siyaqhubeka nokujonga izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni. Into ebonakalayo ekuchukumiseni nakubunzima. Zakhiwe nge Iplastiki emnyama emnyama igqityiwe ukuthinta “irabha” ethambileyo. Iipads kunye Inxalenye yangaphakathi yebhanti yentloko ifakwe kwi-leatherette umgangatho kunye neepadding ezifanelekileyo.
Ukuzigcina ngaphakathi kwetyala singasonga i-Earbud nganye ngesixhobo sayo sokwandiswa esiya kwi-90 degrees. Ngale ndlela bathatha indawo encinci xa behambisa. Ukulingana entlokweni kune ibhalansi egqibeleleyo ukuze ingawi nokuba siyahambakodwa ngaphandle kokubangela ukuphazamiseka akukho xinzelelo ezindlebeni.
Olu luhambo lweSistem yaMandla 7
Ukuhlalutya ngokwasemzimbeni ii-headphones ze-Energy Sistem Travel 7 sibona ukuba zibandakanya amaqhosha ahlukeneyo namazibuko. Usenokuba nayo ulawulo lomculo yintoni enye oyithandayo ngaphandle kokuba ukhuphe i-smartphone yakho epokothweni. Guqula iingoma, nyusa ivolumu uye phezulu, okanye uphendule umnxeba. Unayo yonke into ezandleni zakho.
Kulo I-earphone yasekhohlo siyifumene ukulayisha izibuko, kule meko iyi USB encinci, Ke phantse nayiphi na itshaja iya kuhambelana. Sifumene kwakhona umboko, into eyenza ezi ntloko zentloko zisisebenze njengezandla ezingenakuthetha kwifowuni ngomgangatho wesitiriyo. Ecaleni kwakhe sifumana amaqhosha olawulo lwevolumu, eziya kuthi zisincede sihambise iingoma phambili okanye ngasemva. Kwaye okokugqibela iqhosha lamandla Siza kuyisebenzisela nokudibanisa iBluetooth.
El i-earphone yasekunene inamaqhosha ambalwa. Kuyo kukho tshintshela ekusebenziseni itekhnoloji yokuSusa ingxolo eSebenzayo, ukurhoxiswa kwengxolo, esiza kuthetha ngayo ngoku. Ecaleni kwakhe yi Isibuko esincinci se3.5mm. Enkosi kule port Sinokusebenzisa ii-headphone zethu ezinentambo ukuba ibhetri iyaphela.
Inxalenye yebhanti yentloko inenxalenye yesinyithi apho sifumana khona oonobumba u-L kunye no-R abonisa indawo efanelekileyo yokusetyenziswa. Ukusuka kwesi siqwenga sesinyithi singabandisa ubungakanani bebhanti yentloko ukuya kuthi ga ku-7 "konqakrazo" kwicala ngalinye. Umngxunya ngokwaneleyo kuyo nayiphi na intloko yomntu.
Iifoto azilahlekisi, zintle kwaye zenziwe ngononophelo ukuze zikulungele kwaye zikulungele. Ukuba bakukholisile zithenge ngokunqakraza apha kwiAmazon ngokuhambisa simahla.
Ukuba ungomnye wabo bawuthandayo umculo kwaye uziva onke amanqaku kunye nesandi, i-Energy Sistem's Travel 7 ngumlingani wakho ogqibeleleyo. Inkqubo ye- umgangatho wesandi kunye nobushushu abakwaziyo ukubanika zona zibenza babonakale kwimarike phakathi kwezinye iindlela ezininzi. Iibhasi ezinamandla kunye nokuphakama okugqibeleleyo, Yonke into iyangena kwezi headphone zisothusileyo.
Umgangatho wezinto zayo kunye noyilo zihambelana ne umgangatho wobungcali abakwaziyo ukunikela. Yintoni egqithisile, Amava okumamela ayandiswa ngakumbi yitekhnoloji yokurhoxisa ingxolo ukuba bayabandakanya. Into ebizwa ngokuba yiNgcaciso yeNgcaciso yokuSebenza, kwimeko apho ubungazi, yitekhnoloji leyo ikwahlula kwisandi sangaphandle kwaye icinezela ingxolo yangaphakathi.
Itshathi yeeNkcukacha zobuGcisa
Umzekelo Uhambo 7
Fi kelela 10 m
Ukuphindaphinda 2.4 GHz
Amandla aphezulu 10 mW
Ukungqinisisa 32 Ohm
Isinxibelelanisi I-3.5mm mini jack
kulayishwa izibuko USB encinci
Ibhetri Lithium Polymer 500 mah
Ukuzimela Ukuya kwiiyure ezi-27
Ubukhulu X x 18.5 17 7.5 cm
U bunzima 217 g
Ixabiso 89.90 €
Ikhonkco lokuthenga Uhambo lweSistem yaMandla 7
Iinkonzo kunye neengozi zentloko ye-Energy Sistem Travel 7
El uyilo kunye nezinto ezakhiwe ngazo zisenza sizive siyimveliso esemgangathweni eneempawu ezintle.
Isandi banikezela bafikelela kwi inqanaba lobuchule yintoni ebenza babe yimveliso zintle kakhulu kwiingcali okanye kubaphengululi.
La intuthuzelo xa sizinxiba, ziyahlulahlula kwezinye iimodeli ezicinezela kakhulu okanye zikhululeke kakhulu.
Uyakwazi ukuzisebenzisa ngekhebula le-3.5 mm jack yinto eyongezelelweyo ebalulekileyo xa siphelelwa yibhetri. Ke sinokuqhubeka nokumamela umculo ngaphandle komda wokuzimela.
Ityala lokuthwala yinto yokufumana ekufumanela amanqaku. Yenziwe ngezinto ezilungileyo, isetyenziselwa ukuhambisa ngokukhuselekileyo naphina apho sifuna khona kwaye kuhlala kugcinwe kakuhle kwaye kukhuselwe.
Intambo yejack ye3.5mm
Izinto eziphathekayo Ngayo zenziwe, ukubamba kunye nokubonakala esikuthandayo, kujongeka ngathi ingakrwempa ngokulula. Kuya kuba yimfuneko ukubona ukuba bamelana njani nokuhamba kwexesha.
El ubungakanani befowuni Xa kuthelekiswa nezinye izixhobo kunokuba njalo Kancinci kancinci, nangona i-earphone iyigubungele ngokupheleleyo indlebe iyenza ukuba ibe yodwa. Kukho izimvo ezahlukeneyo malunga nayo, ukuze ibe ntle inokuba nokuba "yipro".
Izinto ezinokukhutshwa ngokulula
Ubungakanani be-headset bunokugqithisa, umbandela wokungcamla
Uhambo lweSistim yaMandla 7
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uvavanyo lwe-Energy Sistem 7 yokujonga kwakhona ii-headphone